အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းအဘို့အယောက်ျားတွေကိုချစ်သောသူ။ ကောင်းစွာ၊ပိုပြီးအထူးသဖြင့်အထက်၊အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစား! သင်မြင်၊အကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းဖန်တီးခဲ့တစ်ဦးတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုလူအလားအလာအခြားရွေးချယ်စရာမှခေတ်ရေစီးကြောင်းဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းကင်းမဲ့ကြောင်းအရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာ။ မေးရင်လူဘယ်နှစ်ယောက်အကြိုက်ဆုံးအမှုအရာ၊အခွင့်အလမ်းသူသွားမယ့်သင်ပြောပြလိင်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ။ ဒီမှာဖြေရှင်းချက်မှနှစ်ခုပေါင်းစပ်! ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောအကြောင်းထင်ပြီ၊ပြုစိတ်ကူးအလုပ်၏ဒီနှင့်အတူအတွင်းသင်သည်ကိုယ်အဘို့မြင်။, ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောအသောသူကိုချစ်ဂိမ်းတွေညစ်ညမ်းသွားပြီတိလယ်နေ့အတွင်း။ အစည္းကယ့်ကိုထွန်းလင်းခြင်းအခါသင်တဆင့်အမှန်တကယ်အတွင်းအပြင်နှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်သောခြေလှမ်းများယူကြပြီဖန်တီးရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း XXX ဂိမ်းကစား။ လို့မရပါကအကြောင်းပိုမိုသိရန်ပလက်ဖောင်း၊စဉ်းစားပေးပါစာဖတ်ခြင်းအပေါ်နှင့်ငါကငါပေးမည်သင်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကပူဇော်ဖို့ရှိသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်အခုအချိန်မှာနှင့်အတွင်းအပြင်–သင်ကစိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ!
တစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးအမှုအရာတို့ကိုမှကြှနျုပျတို့ကဒီမှာမှာအကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲကြီးမှပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖန်တီးတဲ့လူတွေကရယူနိုင်ဘဲအများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့အခွင့်ထူး။ ကျွန်တော်အလေးနက်ဆုံးဖြတ်ချက်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားလူမှုအသိုင်းအခမဲ့ကစားရန်:ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဘဲပေးပြီးတစ်ခုတည်းတစ်ပြား။ အကျိုးအတွက်ဤစနစ်ကိုခွင့်ပြုရန်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေးကြီးစွာသောဂိမ်းများနှင့်ငွေကြေးနှင့်ပြီးနောက်-အ-ချက်–သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်အစောပိုင်းအပေါ်အဲဒီအမင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုအဆုံးအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ အခမဲ့ခံစားရအထောက်အကူနှင့်အတူလွဴဒါန္းသင်ဆန္ဒရှိလျှင်၊ဒါပေမယ့်လုံးဝကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်။, နောက်ဆုံးမှာ၊အကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကိုယ်တိုင်ကရေရှည်တည်တံ့နှင့်အတူနိမ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြော်ငြာအဖြစ်အသေးစား microtransactions အတွက်အမျိုးမျိုးသောဂိမ်းများ။ ပါကဤ microtransactions မည်မဟုတ်အနိုင်ရမှပေးဆောင်သူတို့နီးပါးကမ်းလှမ်းချက်လည်းတစ်ဦးအလှကုန်ပစ္စည်းအပြောင်းသို့မဟုတ်အလားတူအရာတစ်ခုခုကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကျွန်တော်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လက်လွတ်မပေးဆောင်ဖို့ရှိခြင်းကျော်အလေးအဘို့အနိမ့်အရည်အသွေး။ ဒီနေရာမှာထွက်ပေါ်ကနေ၊အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲပေးအပ်ဖို့ကျူးလွန်သည်ထိပ်တန်းဂိမ်းကစားအရေးယူမပါဘဲ။ လူမည်မျှစိတ်ပျက်ခဲ့ကြသည်ခါ Cyberpunk ၂၀၇၇ ထွက်လာ?, သူတို့ပေးဆောင်အစည်းများ၏ငွေအတွက်တစ်ဦးယုတ်ညံ့ထုတ်ကုန်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအဘယ်အရာကိုသူတို့ပေးမည်ဟုကတိပြုခဲ့ကြသည်:နိုင်သော! ကြောင်းဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ဒီမှာမှာအကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊သာဆောင်သင်အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးနှင့်ချင်ကြပါဘူးအတွက်ငွေလဲလှယ်ရေး!
ခပ်သိမ်းသောတစ်ခုတည်းကြောစားသိသောချင်တယ်ဆိုရင်သင်ရှိသည်ဖို့ကောင်းတစ်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံ၊ဂိမ်းရှိသည်ဖို့ကြည့်ရှုစိတ်ကူး။ ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဤတကယ်တော့၊အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံတွေအများကြီး၎င်း၏ဘတ်ဂျက်သို့ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကြည့်စိတ်ကူး။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ရှာမတွေ့လိမ့်မည်ပိုကောင်းပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျရှာနေဂရပ်ဖစ်။ ကျနော်တို့ဖိုင်အားလုံးထွက်ပြိုင်ပွဲနှင့်ယုံကြည်ပြီး၊သူတို့ကအရမ်းဝေးနောက်ကွယ်မှအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လက်ရှိကမ်းလှမ်းချက်! အစိတ်အပိုင်းများ၏အဘယ်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရပ်ဖစ်ချဉ်းကပ်ကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ငှားရမ်းအကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးခဲ့ကြသူအဖို့ဆန္ဒရှိလာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်း။, ဒါကြောင့်စျေးပေါမဟုတ်၊ဒါပေမယ့်သင်အပေါ်အဘိုးထားရန်ထိပ်တန်းဆင့်ဂိမ်း? အခါသင်လိုချင်သောထုတ်ကုန်စည်များအားလုံးယှဉ်ပြိုင်မှုပြီ၊သင်၏ပိုက်ဆံသွင်းထားရန်အဘယ်မှာရှိသင်၏နှုတ်သည်။ အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲသည်ဝမ်းမြောက်ဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့စဉ်းစားခံရဖို့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ ရပ်တန့်ဆွဲသင့်လက်ခေါက်ဆစ်နှင့်အတူအပါအသိုင်းအကြောင်းမဟုတ်နိုင်စွမ်းတွေပို့ရာမှာအဘယ်အရာကိုသင်လိုသောတုတ်နှင့်အတူဘုရင်များနှင့်ရလဒ်ထက်ပိုဖြစ်လိမ့်မည်နန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်ဖစ်များကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အများဆုံးစနစ်များကိုအနိုင်ဖြစ်သင့်ပြေးသူတို့ကိုမပါဘဲတစ်ဦးပြဿနာ။
အချို့လူများအတွက်၊သုံးစွဲခွင့်အပေါ်မိမိတို့ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အများအပြားဂိမ်းထွက်ရှိဖို့နိုင်ဖြစ်ချင်တယ်သုံးပြုရန်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အဖြစ်၎င်းတို့၏။ အဆိုပါသတင်းကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပူဇော်လက်လှမ်းမှတဆင့်နှစ်ဦးစလုံးနတ်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်အများအပြားအခြားသူများ။ ဤအောင်မြင်သည်ဖြင့်လည်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအသုံးချရာက္ဇာ။ ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်က Chrome၊မြေခွေး၊ရှုသို့မဟုတ်အော်ပရာသင်သည်အဘယ်သူမျှမကိစ္စပြုလေသမျှအပြည့်အဝခံစားဂျီများလိင်ဂိမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်။ ဒီစကိုဆိုလိုတယ်အျဆိပ်ကမ်း၏ဤဘြတ္ပြေးကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းမပါဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများ။, သင်ပင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ကယ်တင်ဖြတ်၊ဒါကြောင့်လုပ္ထားေသင့်ရဲ့ဖုန်းမရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများသမျှ! သင်သည်လည်းများအားလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားကစားပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအသုံးပြုပြီးတက်ဘလက်ရှိပါကသင်တဦးတည်း–အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုလုံးဝရင်းသင့်။ ငါတို့သည်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲခွင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းကနေတဆင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနတ်ကို၊ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်များအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေ။ ရှိပါတယ်အစီအစဉ်များအမြန်ဆုံးနောက်ဆုံးမှာ၊ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာဒါကြောင့်တစ်ဦး၏ဦးစားပေးငါတို့ဥစ်စာ။
နေစဉ်ကျွန်တော်လုပ်ဂတိတော်အချို့ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းဂရပ်ဖစ်ဒီအကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကြုံတွေ့နေကြရသည်အနည်းဆုံးအတွက်။ ချင်သောသေချာအောင်အားလုံးဂိမ်းအတွင်းအမှန်တကယ်ကစားရန်ပျော်စရာ။ ဤသည်အောင်မြင်ကနေတဆင့်တဦးတည်းရိုးရှင်းသောမေးခွန်း:မယ်လို့တစ်စုံတစ်ဦးဒီဂိမ်းကိုကစားမပါဘဲလိင်ဒြပ်စင်? လျှင်အဖြေသည်"ဟုတ်သည်"ထို့နောက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအကောင်းဖြစ်ပါသည်–အဖြေမရှိပါ'ပဲဖြစ်တယ်'ကိစ္စများဖြစ်နိုင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုအကြောင်းအားလုံး၏အဆိုပါဂိမ်းကိုကစားပါလိမ့်မယ်အဘို့အသင့်လျော်သောဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်-အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းဗားရှင်းဖြစ်ကိုကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်အကြောင်းကျနော်တို့ပါဝင်သည်ကိုညစ်ညမ်းများအတွက်အခမဲ့!, ကျွန်တော်ထင်တာကကိုယ့်အကြောင်းကိုဖုံးလွှမ်းရာအားလုံးကိုအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့၊ကျွန်မတို့ဆီမှာအများကြီးအမှုအရာစီစဉ်ထားသည့်အနာဂတ်များအတွက်၊ကျနော်တို့သေချာပါစေဖို့အထပ္မံျဖည့္စြက္သည္ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်အတွက်ကြောင့်အချိန်အခါကျနော်တို့ကပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အတွက်ရရှိနိုင်။ အခုအချိန်မှာ၊ဒါကြောင့်အချိန်သင်တို့အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်နှင့်အတွင်းအပြင်! ရပ်တန့်ရိုက်နှက်ချုံပတ်လည်မှာဖန်တီး၊သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရယူပါ!